China Cell Total RNA Mwepu Kit Onye nrụpụta na onye na-eweta |Mbido
ORF1ab, N, gbakwunyere UK, ZA, BR mutants
ORF1ab, N, gbakwunyere UK, ZA, IND, BR mutants
ORF1ab, N gbakwunyere IND mutant
Ọbara (Plasma) miRNA
RNAlater (Maka RNA Stabilization)
Mwepu DNA Tissue anụmanụ
Obere obere obere DNA (<1ml)
Ọbara DNA Midi Kit (1-5ml)
Premix maka cDNA maka qPCR
Premix maka cDNA maka qPCR nwere gDNase
Premix maka cDNA sitere na lncRNA nwere gDNase
PCR Hero ™ (Ya na Dye)
2 × Nnukwu arụmọrụ PCR mmeghachi omume premix
PCR EasyTM (ya na agba)
2× Ngwa ngwa PCR mmeghachi omume premix usoro
Ezigbo oge PCR EasyTM-SYBR Green I
Ezigbo oge PCR EasyTM-Taqman
RT-PCR EasyTM I (Otu Nzọụkwụ)
RT-PCR EasyTM II (nzọụkwụ abụọ)
RT-qPCR EasyTM I (Otu Nzọụkwụ)
Ihe nrịbama DNA
1kb DNA ọkwa
Ngwa nchọpụta nucleic acid COVID-19
Ngwa nyocha Antigen maka Covid(NS, NP, Saliva)
Ngwakọta Mkpokọta RNA anụmanụ
MMLV Agbanwe (2)
Ngwakọta RNA dị iche iche anụmanụ
Ọnụ ọgụgụ cell RNA 3
Ngwakọta mkpokọta RNA ichebe ihe ọkụkụ
adreesị:D2, ngọngọ A, Tri-medical innovation center, No.18, North Bayi Road, Yongning Street,611130, Chengdu, China
Ngwakọta mkpokọta RNA dịpụrụ adịpụ
Na-arụ ọrụ na ụlọ okpomọkụ (15-25 ℃)
Site na kọlụm na-ehicha DNA
Mkpụrụ RNA dị elu
Ngwa ngwa: Mechaa mmịpụta n'ime nkeji iri na otu
Nchekwa: Ọ nweghị kemịkalụ Organic
Ngwa a na-eji kọlụm atụgharị na usoro nke Foregene mepụtara, nke nwere ike wepụ RNA dị ọcha na ịdị elu nke ọma site na mkpụrụ ndụ emebere na 96, 24, 12, na 6-well plates.
Ngwa ahụ na-enye kọlụm DNA-Cleaning nke ọma, nke nwere ike kewapụ ihe dị elu na cell lysate ngwa ngwa, kechie ma wepụ DNA genomic.Ọrụ ahụ dị mfe ma na-azọpụta oge.
Tya RNA-na kọlụm nwere ike jikọta RNA nke ọma na usoro pụrụ iche.Enwere ike ịhazi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe nlele n'otu oge.
Ngwa mejupụtara RE-03111 RE-03114
50 T 200 T
Ihe nchekwa cRL1* 25 ml 100 ml
Ihe nchekwa cRL2 15 ml 60 ml
Ihe nchekwa RW1* 25 ml 100 ml
Ihe nchekwa RW2 24 ml 96 ml
ddH2O na-efu RNase 10 ml 40 ml
RNA-naanị kọlụm 50 200
Kọlụm na-ehicha DNA 50 200
Ntuziaka 1 1
Biko yie gloves ma were usoro nchebe n'oge a na-arụ ọrụ dịka Buffer cRL1 na Buffer RW1 nwere nnu chaotropic na-akpasu iwe.
■ A na-arụ ọrụ ahụ dum na ụlọ okpomọkụ (15-25 ℃), na-enweghị ice bat na obere okpomọkụ centrifugation.
■ Ngwa niile enweghị RNase, ọ nweghị mkpa ichegbu onwe gị maka mmebi RNA.
∎ kọlụm DNA- Cleaning kpọmkwem na-ejikọta DNA, ka ngwa ahụ wee nwee ike wepụ nje nje DNA na-etinyeghị ya DNA ọzọ.
∎ Mkpụrụ RNA dị elu: Kọlụm naanị RNA nwere ike sachaa RNA nke ọma.
∎ Ọsọ ọsọ: ọ dị mfe iji rụọ ọrụ yana enwere ike mezue ya na nkeji iri na otu.
■ Nchekwa: Ọ dịghị ihe reagent organic achọghị.
■ Ọdịmma dị elu: RNA dị ọcha dị oke ọcha, enweghị protein na adịghị ọcha ndị ọzọ, ọ nwekwara ike izute nnwale dị iche iche na-esote.
Ọ dabara maka mmịpụta na ịdị ọcha nke mkpokọta RNA sitere na mkpụrụ ndụ emebere na efere 96, 24, 12 na 6.
Eserese batrị agarose gel nke Cell Total RNA Isolation Kit mesoro ọnụọgụ mkpụrụ ndụ dị iche iche dị n'elu, elu elu olu 20μl, were 2μl sachaa mkpokọta RNA 1%.
Nchekwa na ndụ nchekwa
Enwere ike ịchekwa ngwa ahụ maka ọnwa 12 na ụlọ okpomọkụ (15-25 ℃) ma ọ bụ 2-8 ℃ maka ogologo oge (ọnwa 24).
Enwere ike ịchekwa ihe nchekwa cRL1 na 4 ℃ maka otu ọnwa ka ịgbakwunye 2-hydroxy-1-ethanethiol (nhọrọ).
Nke gara aga: Ngwakọta Mkpokọta RNA anụmanụ
Osote: Ngwakọta Mkpokọta ihe ọkụkụ RNA
ngwa iche iche cell RNA
ngwa mkpokọta RNA ọcha
A naghị ewepụta RNA ma ọ bụ RNA dị ala
A na-enwekarị ihe dị iche iche na-emetụta arụmọrụ mgbake, dịka: ọdịnaya RNA anụ ahụ, usoro ọrụ, elution volume, wdg.
1. Ice bath ma ọ bụ cryogenic (4 Celsius C) centrifugation mere n'oge ọrụ.
Nkwanye: Na-arụ ọrụ na ụlọ okpomọkụ (15-25 Celsius C) n'ime usoro dum, emela ice bat na centrifuge na obere okpomọkụ.
2. Nchekwa nlele na-ezighi ezi ma ọ bụ oge nchekwa oke.
Nkwanye: Chekwa ihe nlele na -80 Celsius ma ọ bụ ifriizi na mmiri mmiri nitrogen ma zere iji friza eme ihe ugboro ugboro;gbalịa iji anụ ahụ ọhụrụ ma ọ bụ mkpụrụ ndụ emebere maka mmịpụta RNA.
3. Ezughị ezu sample lysis.
Nkwanye: Mgbe ị na-eme ka anụ ahụ dị n'otu, hụ na anụ ahụ na-emekọ ihe nke ọma yana na mkpụrụ ndụ anụ ahụ kewara nke ọma iji kọwaa ntọhapụ nke RNA.
4. A naghị atụkwasị eluent nke ọma.
Nkwanye: Kwenye na ddH enweghị RNase2A na-agbakwunye O n'ime ala n'etiti akpụkpọ ahụ kọlụm nke ịdị ọcha.
5. Agbakwunyeghị olu ziri ezi nke ethanol zuru oke na Buffer RL2 ma ọ bụ Buffer RW2.
Nkwanye: Soro ntuziaka a, tinye nha ziri ezi nke ethanol zuru oke na Buffer RL2 na Buffer RW2 wee gwakọta nke ọma tupu iji ngwa ahụ.
6. Usoro ihe nlele anụ ahụ adịghị mma.
Nkwanye: Jiri 10-20 mg nke anụ ahụ ma ọ bụ (1-5) × 106mkpụrụ ndụ kwa 500 μl ihe nchekwa RL1, n'ihi na iji anụ ahụ gabigara ókè nwere ike ime ka mmịpụta RNA belata.
7. Olu elution na-ezighi ezi ma ọ bụ elution ezughị ezu.
Nkwanye: Olu elution nke kọlụm nchacha bụ 50-200 μl;Ọ bụrụ na mmetụta elution adịghị afọ ojuju, a na-atụ aro ịgbatị oge ntinye ụlọ okpomọkụ mgbe gbakwunyere ddH na-enweghị ọkụ ọkụ RNase-Free.2O, ọmụmaatụ maka nkeji 5-10.
8.The kọlụm dị ọcha nwere ethanol fọdụrụnụ mgbe Buffer RW2 saa.
Nkwanye: Ọ bụrụ na e nwere ihe fọdụrụ na ethanol mgbe ịsachara Buffer RW2, centrifugation tube efu maka 1min, enwere ike ịbawanye oge ọrụ centrifugation tube efu ruo 2min, ma ọ bụ enwere ike itinye kọlụm dị ọcha na ụlọ okpomọkụ maka 5 min iji wepụ ihe fọdụrụnụ nke ọma. ethanol.
RNA dị ọcha na-eweda ya ala
Àgwà nke RNA dị ọcha metụtara ihe ndị dị ka ichekwa ihe nlele ahụ, mmetọ RNase, na nhazi, wdg.
1. A naghị edebe ihe nlele anụ ahụ n'oge.
Nkwanye: Ọ bụrụ na ejighị ihe nlele anụ ahụ ma ọ bụ sel mee ihe n'oge kwesịrị ekwesị mgbe a chịkọtachara, kpochie ozugbo na -80 Celsius C ma ọ bụ nitrogen mmiri mmiri.Iji wepụ RNA, jiri anụ ahụ ma ọ bụ ihe nlele cell ewepụtara ọhụrụ mgbe ọ bụla enwere ike.
2. Ugboro ugboro ifriizi-thawing nke anụ ahụ sample.
Nkwanye: Mgbe ị na-echekwa ihe nlele anụ ahụ, ọ kacha mma ịkpụ ha n'ime obere iberibe maka nchekwa, ma wepụ otu n'ime iberibe ahụ mgbe ị na-eji ha ka ịzenarị oyiri ugboro ugboro nke sample na mmebi nke RNA.
3. A na-ewebata RNase ma ọ bụ ghara iyi uwe mkpuchi, ihe mkpuchi, wdg n'oge ọrụ ahụ.
Nkwanye: A na-eme nnwale mmịpụta RNA kacha mma n'ime ụlọ njikwa RNA dị iche iche wee kpochapụ tebụl tupu nnwale ahụ.
Yiri gloves na masks enwere ike iwepu n'oge nnwale ahụ iji belata mmebi RNA sitere na iwebata RNase.
4. A na-emetọ reagents na RNase n'oge eji.
Nkwanye: Dochie jiri ngwa mkpọpụta anụmanụ RNA ọhụrụ maka nnwale ndị metụtara ya.
5. Ọkpụkpọ centrifuge, ndụmọdụ, wdg eji eme ihe na RNA na-emetọ ya na RNase.
Nkwanye: Kwenye na tubes centrifuge, ndụmọdụ, pipettes, wdg. ejiri na mmịpụta RNA bụ RNase n'efu.
RNA emepụtara dị ọcha na-emetụta nnwale ndị dị n'okpuru ala
RNA sachara site na kọlụm dị ọcha, ọ bụrụ na ion nnu, ọdịnaya protein buru ibu ga-emetụta nnwale nke ala, dị ka: ntụgharị ntụgharị, Northern Blot et al.
1. RNA elutioned nwere residues ion nnu.
Nkwanye: Kwenye na agbakwunyere oke ethanol ziri ezi na Buffer RW2 ma mee 2 kọlụm na-asachapụ na ọsọ centrifugal nke egosiri maka ịrụ ọrụ;Ọ bụrụ na enwere ihe fọdụrụ ion nnu, hapụ kọlụm nke ịdị ọcha na Buffer RW2 maka 5 min na ụlọ okpomọkụ ma mee centrifugation iji bulie mwepụ nke mmetọ nnu.
2. Ethanol fọdụrụnụ na elutioned RNA.
Nkwanye: Kwenye na mgbe ịsacha RW2 na-ekpuchi ihe, rụọ ọrụ centrifugation tube efu na ọsọ centrifugation egosipụtara maka ịrụ ọrụ, mụbaa oge ọrụ centrifugation tube efu ruo 2 min ma ọ bụrụ na ọ ka nwere ihe fọdụrụ na ethanol, ma ọ bụ hapụ ya na ụlọ okpomọkụ maka 5. m
Ngwakọta ihe ọkụkụ RNA dịpụrụ adịpụ Plus